Lessinia ifulethi iVerona
Ifulethi elikhulu nelikhanyayo elisenkabeni yedolobha. Inegumbi lokuphumula elikhulu elinekhishi, igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokugezela elinefasitela. Ithala elizimele elinemibono emihle phezu kwesigodi. Ukupaka ngezansi
Njengoba isendaweni eyibanga lokuphonswa kwetshe ukusuka esigcawini sesonto, enkabeni yedolobha elijabulisayo, leli fulethi linendawo eseceleni nethule kakhulu enethala elikuvumela ukuthi udle ngaphandle ngenkathi ujabulela ukubuka okuhle phezu kwesigodi.
Ifulethi litholakala edolobhaneni laseBosco Chiesanuova, isikhungo samaholide futhi indawo yokuqala yohambo oluningi epaki yemvelo yaseLessinia.
Ebangeni lokuhamba, elifinyeleleka ngezinyawo emizuzwini emi-3/5, kunezitolo zegrosa, amabha, izitolo zamakhekhe, izindawo zokudlela kanye nama-pizzeria, kanye nesinema / yaseshashalazini enokukhethwa okucebile kwemibukiso.
Uhambo lwemizuzu engu-7 yiPalaghiaccio, evulekile ehlobo nasebusika.
Ukuhamba emijahweni yokushushuluza enqamula izwe kuyimizuzu eyi-15 ngemoto.
Itholakalela ukungena nokuphuma, nangocingo nganoma yisiphi isidingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bosco Chiesanuova namaphethelo